ဆောကျလုပျရေးဆိုငျရာ စာခြုပျတဈခုကို ဘယျလိုရေးသားမလဲ - Myanmar Builders Guide
ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးတဈခုကို လုပျတော့မယျဆိုလြှငျ လုပျငနျးနဲ့ သကျဆိုငျတာတှကေို နားလညျဖို့ လိုအပျသလို လုပျငနျးအတှကျ စာခြုပျခြုပျဆိုတဲ့အခါမှာလညျး မှနျကနျတဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှကေို နားလညျဖို့ အငျမတနျ လိုအပျပါတယျ။
လုပျငနျးတဈခုလုပျလို့ ဆိုငျရာပိုငျရာတှနေဲ့ စာခြုပျခြုပျတော့မယျဆိုလြှငျ ကိုယျက ဦးအောငျ ခြုပျမှာလား၊ ကိုယျ့ကို ပွနျခြုပျတာ ခံမှာလား။ ဘယျသူမှတော့ ကိုယျ့ကို လာခြုပျတာ မခံခငျြကွပါဘူး။ အတူ အပွနျအလှနျ တာဝနျယူကွတာမြိုးပဲ ဖွဈခငျြကွမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ ဥပဒဆေိုငျရာ လုပျထုံးလုပျနညျးတှကေို သိထားဖို့က တကယျလိုအပျပါတယျ။ အကယျလို့ နားမလညျဘူးဆိုရငျလညျး နားလညျတတျကြှမျးတဲ့သူတှနေဲ့ တိုငျပငျလုပျဆောငျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါဆို ဒီစာခြုပျထဲမှာ ဘာတှထေညျ့ရမယျ ဘာတှပေါရမယျ ဆိုတာကိုတော့ ဗဟုသုတအနနေဲ့ သိကို သိထားရမှာပါ။ ကိုယျ့ရှနေ့ကေ ခြုပျပေးသညျ့တိုငျအောငျ ကိုယျကိုယျတိုငျကပါ သိနတေော့ ပိုပွီးတော့ ကောငျးပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ဆောကျလုပျရေးဆိုငျရာ စာခြုပျတဈခု ဘယျလိုရေးသားမလဲ? ဆိုတာနားလညျလှယျအောငျ အပိုငျး နှဈပိုငျးခှဲပွီး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
---Writing Your Construction Contract---
1. Write the title andalittle preamble
2. Describe the work that will be done
3. Include financial information
4. Include payment due dates and fees
5. Provideaproject description
6. Describe how any changes to the work order will be handled
7. CreateaSignature Line
---Meeting State Requirements---
1. Check your state law for required inclusions
2. Provideaprojected construction schedule
ဒီအထိ ဖတျလာပေးတဲ့အတှကျလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျမိသလို၊ မိတျဆှတေို့အတှကျ အကြိုးရှိဖို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရေးသားမလဲ
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်သလို လုပ်ငန်းအတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်း မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို နားလည်ဖို့ အင်မတန် လိုအပ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လို့ ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် ကိုယ်က ဦးအောင် ချုပ်မှာလား၊ ကိုယ့်ကို ပြန်ချုပ်တာ ခံမှာလား။ ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ့်ကို လာချုပ်တာ မခံချင်ကြပါဘူး။ အတူ အပြန်အလှန် တာဝန်ယူကြတာမျိုးပဲ ဖြစ်ချင်ကြမှာပါ။
ဒါကြောင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို သိထားဖို့က တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်း နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီစာချုပ်ထဲမှာ ဘာတွေထည့်ရမယ် ဘာတွေပါရမယ် ဆိုတာကိုတော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိကို သိထားရမှာပါ။ ကိုယ့်ရှေ့နေက ချုပ်ပေးသည့်တိုင်အောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပါ သိနေတော့ ပိုပြီးတော့ ကောင်းပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်တစ်ခု ဘယ်လိုရေးသားမလဲ? ဆိုတာနားလည်လွယ်အောင် အပိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ စာချုပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြတဲ့ Title တစ်ခုရေးပါ။ ပြီးရင်တော့ စာချုပ်ကို စတင်တဲ့အနေနဲ့ နိဒါန်းတစ်ခု ရေးရပါမယ်။ ဒါကလည်း သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲကြီး စဉ်းစားနေစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့်သူဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လုပ်ငန်း၊ ဘယ်ရာထူး၊ လုပ်မယ့် ပရောဂျက်၊ တည်နေရာ၊ ပရောဂျက် စတင်မယ့်ရက်၊ အဆုံးသတ်မယ့်ရက် စသဖြင့် ရေးသားပြင်ဆင်မှုနဲ့ စတင်ရပါမယ်။
ပြီးတာနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ဆောင်မယ့်၊ ဖော်ဆောင်မယ့် ကိစ္စအတွက် စက်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုနေရာမှာ ဘာအတွက်သုံးမယ်၊ အရည်အတွက်၊ အရည်အသွေး၊ အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံကို တိတိကျကျ ချရေးထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါတွေ ရေးပြီးရင်တော့ ဘတ်ဂျက်အတွက် ခရေစေ့တွင်းကျ တွက်ချက်ဖို့ လိုပါပြီ။ လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ဘယ်လောက်ဟာ Owner သို့မဟုတ် Client တွေက ကျခံရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုလည်း တပါတည်း ထည့်ရေးရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် စာချုပ်စာတမ်းဖိုး၊ လုပ်ငန်းကာလအတွင်း ငွေပေးချေရမယ့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပေးချေရမယ့်ပမာဏ စတဲ့ ကုန်ကျငွေတွေကို သေသေချာ ရေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ဘတ်ဂျက် ပမာဏကို တွက်ချက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကို ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်မှာ စတင်ပေးဆောင်တယ်၊ ဘယ်နှလ တစ်ခါပေးချေရမယ်စတဲ့ အချိန်ကာလတွေနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ငွေပေးချေတယ် စတာတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်စွက်ရပါမယ်။
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ပရောဂျက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ တာဝန်တွေကို ဖော်ပြပေးရမှာပါ။ အကျယ်တဝင့် အသေးစိတ် ရေးစရာမလိုပါဘူး။ ပရောဂျက်ရဲ့ တာဝန်ကို အကျဉ်းချုပ်တော့ ဖော်ပြပေးရပါတယ်။
Owner/ Client တို့ကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အလုပ်နဲ့ အပို ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပေါ်လာခဲ့သည်ရှိသော် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်အနေနဲ့ စည်ကမ်း သတ်မှတ်ချက်တချို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ရပါမယ်။
ဒါကတော့ စာချုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို သဘောတူညီကြောင်း ဖော်ပြဖို့အတွက် Sign ထိုးဖို့နေရာ ထားထားပေးရမှာပါ။ လက်မှတ်အောက်မှာ လက်မှတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသေးတယ်။
နေရာဒေသ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စာချုပ်စာတမ်း ဥပဒေသတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး။ ဒီတော့ စာချုပ်စာတမ်းမှာပါတဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကလည်း အဲ့နယ်မြေမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
ချုပ်ဆိုမယ့် စာချုပ်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း အလုပ် ဘယ်လောက်ပြီးရမယ်ဆိုတာကို ထည့်သွင်းရပါဦးမယ်။ တစ်ရက်ကို ဘယ်အလုပ်တွေ ပြီးတယ်၊ ဘယ်လောက် အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဇယား တစ်ခုကတော့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအထိ ဖတ်လာပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်မိသလို၊ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အကျိုးရှိဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
Read 697 times	Last modified on Tuesday, 07 January 2020 09:45
အဖွူနှငျ့ အပွာကို တှဲဖကျ၍ အလှဆငျထားသော အိမျအခနျး ပုံစံ ၅ မြိုး
ထူးဆနျးစှာ ပြောကျကှယျသှားသော ဆဒ်ဒါနျရကေနျကွီး
အကောငျးဆုံး ဗိသုကာလကျရာမြား ခရီးသှားလာရေးအတှကျ လမျးညှနျ အပိုငျး (၂)
အကောငျးဆုံး ဗိသုကာလကျရာ ခရီးသှားလာရေးအတှကျ လမျးညှနျ အပိုငျး (၁)